UHunt ukhala ngokungabhalansi kahle kweqembu lakhe kwiChippa
July 25, 2021 July 25, 2021 Impempe.com
UGavin Hunt, osanda kuqashwa njengomqeqeshi weChippa United, uthi into ayibona ibalulekile futhi afuna ukuyenza ‘ukubhalansisa’ leli qembu.
UHunt, obecija iKaizer Chiefs ngesizini edlule, umangaze abaningi ethatha umsebenzi wokuqeqesha iChilli Boys emasontweni edlule. Bekungakapheli sikhathi esitheni exoshiwe kwiChiefs njengoba esezibeke engcupheni yokuthi kumphinde lokho.
Kuyaziwa ukuthi abaqeqeshi abahlali kwiChippa ngenxa yokuthi uSiviwe “Chippa” Mpengesi ubakhomba indlela ngokushesha. Nokho uHunt uthe usaneme ngakubonile kodwa zikhona izindawo ezimbalwa angajabulile ngazo eqenjini.
“Ngiyajabula ukuba lapha kodwa ngingasho ngithi ziningi izinto okumele sizenze. Sizothatha ngakunye, sicathule. Kodwa selokhu ngifikile lapha ngiyajabula, kusekuhle.
“Asikadlali mdlalo kodwa indlela abadlali abenza ngayo uma siziqeqesha yinhle kakhulu,” kubeka uHunt. Ngesikhathi uHunt esayina kwiChippa emasontweni edlule, kube nokuhlukana phakathi kubalandeli bebhola mayelana nokuthi uthathe isinqumo esiyiso yini.
Kukhona ababona engeke afike ngisho emidlalweni eyishumi neqembu, kanti abanye babona ezohlala eqenjini kuze kuphele isizini ezoqala. Yena azimkhathazi zonke lezi zinkulumo njengoba ebeke ingqondo yakhe emsebenzini abhekene nawo.
“Kubalulekile ukuthi sibhalansise iqembu, yinto esemqoka kakhulu leyo. Ngalokho ngichaza ukuthi ngeke ube nenqwaba yabadlali abadlala enkabeni yenkundla kodwa bangabi khona abadlala ezimpondweni.
“Kumele iqembu libe nabadlali abenele kuzo zonke izindawo,” kuchaza uHunt. Ngabe bakhona abadlali ababonayo ufuna beze eqenjini ngaphambi kokuthi kuqale isizini entsha yeDStv Premiership?
“Ngiyakhuluma nosihlalo (uMpengesi) zonke izinsuku. Ziningi kakhulu izinto esisebenza ngazo, siya phambili sibuye sihlehlele emuva. Lezi zinto zithatha isikhathi,” kuphetha uHunt.
FUNDA NALA: Isaya kude ingxabano yeSundowns noPitso esiveza namahlazo abefihliwe
UMpengesi wayethembise ukuthi uzomeseka uHunt futhi ngeke ayenze le nto yakhe yokuvele adinwe axoshe nje ngoba usethole umqeqeshi onamava. Kuzocaca ngokuhamba kwesizini ukuthi uzokwenza yini lokhu akuthembisa.
Impempe yake yabika phambilini ukuthi uHunt ufuna ukusayinisa uBuhle Mkhwanazi ayesebenza naye kwiBidvest Wits kudala. Okusha ngalokhu wukuthi umholo ofunwe wuMkhwanazi kuthiwa yiwo osavimbe izinto.
Nokho angase atheleke eGqeberha ngesonto elizayo lo mdlali ukuze kuqedelwe izingxoxo njengoba kuvele ukuthi iqembu liyazama ukuyithola imali yokuthi ligcine limthathile.
Previous Previous post: Isixakaxaka seRoyal AM ne-PSL sizobambezela ukuqala kwesizini
Next Next post: UPitso uyiqhathe wayishiya ethi khona umdlali azomlanda kuleli